Yaa u maqan Kurdiyiinta markuu Mareykanka isaga baxo Suuriya? | Saxil News Network
Image captionMareykanka waxaa Suuriya ka jooga ciidammo lagu qiyaasay 2,000
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo in heshiis ku saabsan dhowridda dagaal yahannada Kurdiyiinta ee ku sugan Suuriya lala gaaro Turkiga, kaddib marka uu Mareykanka isaga baxo halkaasi.
Image captionMike Pompeo oo salaamaya dhaxal sugaha Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al-Nahyan
Muxuu Turkigu ku jawaabay?
Image captionMadaxweyne Erdogan ayaa ku hanjabay inuu la dagaallami doono kooxda YPG ee ku sugan Suuriya
Toddobaadkii hore, madaxweyne Erdogan ayaa si caro leh u diiday baaq uga yimid la taliyaha ammaanka ee dalka Mareykanka John Bolton, kaas oo ku aaddanaa dhowridda dagaal yahannada Kurdiyiinta.
Wuxuu sheegay in hadalkaasi uu yahay “mid aan la aqbali karin